ဟာသ – popin
……… “ကျွန်​​တော့်​ကိုဖမ်းကြပါ။ ကျွန်​​တော့်​ကို မြန်​မြန်​ဖမ်း​ပေးကြပါ အီး အဟီး” ​မောင်​သာ​အေး ရဲစခန်းထဲကို ငိုကြီးချက်​မ ​ပြေးဝင်​သွားတယ်​။ တာဝန်​ကျရဲအရာရှိက “ကဲ ထိုင်​ပါ။တစ်​ကိုယ်​လုံးလည်း ဒဏ်​ရာ​တွေနဲ့ မြင်​မ​ကောင်းပါလား။ ဘယ်​လိုဖြစ်​တာလဲ။ ဘာ​ကြောင့်​ဖမ်းရမှာလဲဆိုတာ ​ပြောပါဦး” “ဒီလိုပါ ဦးရဲကြီးရယ်​။ ကျွန်​​တော်​နဲ့ အွန်​လိုင်းမှာချစ်​ကြိုက်​​နေတဲ့ ​ ကောင်​မ​လေးကို အခု တည်းခိုခန်းမှာချိန်း​တွေ့ပြီးမှ ဒီအတိုင်း ထားပစ်​ခဲ့ပါတယ်​။ကျွန်​​တော့်​မှာအပြစ်​ရှိပါတယ်​။ ကျွန်​​တော့်​ကိုဖမ်းပါဗျာ” “ဟာကွာ မင်းမို့လို့ နှမချင်းမစာမနာ လုပ်​ရက်​တယ်​။ ​ကောင်းပြီ​လေ ဒါဆိုရင်​​တော့ ပြစ်​မှု​မြောက်​သွားပြီ။ ဖမ်းရမှာ​ပေါ့။ ကဲ ဖြစ်​စဉ်​ကို အစက​နေ​ပြောပြပါ” ရဲအရာရှိက စာအုပ်​နဲ့​ဘောပင်​ယူပြီး လိုက်​မှတ်​ဖို့ပြင်​တယ်​။ “ဒီလိုပါဦးရဲကြီးရယ်​။ အွန်​လိုင်းကချစ်​သူကို ခိုး​ပြေးဖို့ ကျွန်​​တော်​ တည်းခိုးခန်းတစ်​ခုကို ချိန်းလိုက်​ပါတယ်​။ ကျွန်​​တော်​​ တည်းခိုခန်းကိုရောက်​သွား​တော့ သူက အရင်​​ရောက်​နှင့်​​နေပါပြီ” “ဟုတ်​ပြီ ဆက်​​ပြော” Continue Reading →
admin /August 4, 2019
ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအလိုရှိသည်။ (ရေငုပ်သင်္ဘောတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်) ၁။ ဒန်အိုးပေါက်ဒယ်အိုးပေါက် ဖာဖူးသောအတွေ့အကြုံ ငါးနှစ်ရှိရမည်.. ၂။ ရေနစ်သေဖူးသောမျိုးရိုးရှိရမည်.. ၃။ လုပ်ငန်းခွင်တွင်အချိန်ပြည့်၂၄နာရီအသင့်အနေအထား နေနိုင်ရမည်.. ၄။ လိုအပ်လျှင်ရေအောက်တွင်အပြင်သို့ထွက်၍ ဝရိန်ဆော်နိုင်ရမည်.. မှက်ချက်။ ။ ထောက်ခံပွဲလိုက်ဖူးသောသူများအား ဦးစားပေးရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ :p :p N Kham Aung Unicode ကြှမျးကငျြဝနျထမျးအလိုရှိသညျ။ (ရငေုပျသငေ်ျဘာတှငျတာဝနျထမျးဆောငျရနျ) ၁။ ဒနျအိုးပေါကျဒယျအိုးပေါကျ ဖာဖူးသောအတှအေ့ကွုံ ငါးနှဈရှိရမညျ.. ၂။ ရနေဈသဖေူးသောမြိုးရိုးရှိရမညျ.. ၃။ လုပျငနျးခှငျတှငျအခြိနျပွညျ့၂၄နာရီအသငျ့အနအေထား နနေိုငျရမညျ.. ၄။ လိုအပျလြှငျရအေောကျတှငျအပွငျသို့ထှကျ၍ ဝရိနျဆျောနိုငျရမညျ.. မှကျခကျြ။ ။ ထောကျခံပှဲလိုကျဖူးသောသူမြားအား ဦးစားပေးရှေးခယျြမညျဖွဈပါသညျ။ :p :p N Kham Aung
တကယ်ကို မခံစားနိုင်လွန်းလို့ပါ တရားသူကြီးမင်းရယ်..
admin /August 2, 2019
တရားသူကြီး။ ။အဖြစ်အပျက် အစအဆုံး အသေအချာ ပြောပြပါ မိန်းကလေး မိန်းခလေး ။ ။ သူ ကျွန်မကို အခန်းထဲခေါ်သွားပါတယ် တရားသူကြီး ။ ။အဲဒါကြောင့် ဓားနဲ့ ထိုးတယ်ပေါ့ မိန်းခလေး ။ ။မဟုတ်ဖူးရှင့် အတင်းဖက်နမ်းသေးတယ် တရားသူကြီး ။ ။အင်းပေါ့လေ ကာယိနြေ္ဒပျက်တော့ ဓားနဲ့ ထိုးတယ်ဆိုပါတော့ မိန်းခလေး ။ ။မထိုးသေးဖူးရှင့်။ အဝတ်အစားတွေ ချွတ်ခိုင်းတယ် ကျွန်မလည်းကြောက်တော့ ချွတ်ရတာပေါ့ တရားသူကြီး ။ ။အဲဒါနဲ့ ဓားနဲ့ ထိုးရောလား မိန်းခလေး ။ ။မထိုးသေးဖူးရှင့်။ သူကအတွင်းခံပါ ဆက်ချွတ်ခိုင်းတယ်ရှင့်။ တရားသူကြီး ။ ။ဒါတေါ့လွန်တာပေါ့။ မိန်းခလေးသိက္ခာကုန်နေပီဘဲ။ အဲဒီတော့ ဓားနဲ့ထိုး လိုက်တာပေါ့။ မိန်းခလေး ။ ။မထိုးသေးဖူးရှင့်။ ကျမကိုကုတင်ပေါ် Continue Reading →
လူတိုင်း ကံဆိုးမှုနဲ့ကြုံကြိုက်ဖူးပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေနဲ့ တွေ့ပြီဆို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ အခက်တွေ့နေချိန်တွေရှိတာပေါ့။ တစ်ချို့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အရာလေးတွေဟာ အချိန်လျှပ်တစ်ပြက်အတွင်းမှာပဲ ရယ်စရာဟာသဖြစ်စေတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ အောက်မှာ တစ်ချက်လောက် ထောက်ကြည့်လိုက်ပါ… (၁) ကိုယ့်ကို သူတို့အစာနဲ့အမြင်မှားနေသောအခါ… တော်သေးတယ် ခေါင်းမပြုတ်သွားတာ ကံကောင်း (၂) ဂုဏ်ပြုခံရတိုင်း ပျော်စရာကောင်းတယ်လို့တော့မထင်နဲ့ (၃) ငှက်အစုတ်ပလုပ်… လန့်ထှာ :3 (၄) တောရိုင်း ဟိုင်အီးနားလေးကြည့်ရတာ တော်တော်ပျော်နေပုံပဲ..ရှေ့က မိန်းကလေးကတော့… (၅) ကိုယ့်အကျီ င်္နဲ့အနောက်က အဆောက်အုံဟာ တူနေသောအခါ (၆) စလင်းဘတ်အိတ်က အလှဆင်အမွှေးနဲ့ ကိုယ့်ဆံပင်အရောင် ထပ်တူကျနေသောအခါဝယ်.. (၇) မင်္ဂလာဝတ်စုံပေါ် ၀ိုင်ဖိတ်ကျတာလောက် သတို့သမီးတွေ အသည်းပေါက်တာရှိဦးမလား… (၈) ယောဂသင်တန်းမှာ ယောက်ျားလေးဆိုလို့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းရှိနေတဲ့အခါ .. (၉) ကိုယ်တွေရုံး ယူနီဖောင်းက Continue Reading →
ဘောစိမမတယောက် သူ့မရဲ့လေးဆယ့်ငါးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ အလှပြင်ဆိုင်ကိုသွားပြီး မျက်နှာပေါ်ကအရေးအကြောင်းတွေကို ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ် ပိုက်ဆံတော်တော်ကုန်သွားပေမဲ့ မှန်ထဲမှာမြင်နေရတဲ့ သူမရဲ့နုပျိုနေတဲ့မျက်နှာလေးကိုတွေ့တော့ ကျေနပ်ပြီးပြုံးနေတယ် ရုပ်ကနုပျိုသွားတော့ သူမရဲ့စိတ်ကလည်းလန်းဆန်းတက်ကြွလာပြီး အိမ်ပြန်လမ်တလျှောက်လုံးမှာ သူမရဲ့ဟန်ပန်အမူအရာတွေက တကယ့်ကို ဖျက်လတ်သွက်လတ်နေတာပါ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု့မြင့်မားလာခြင်းနဲ့အတူ တပါးသူတွေရော သူမအပေါ် ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာ သိချင်လာတယ် အာ့နဲ့ ဖိနပ်ဆိုင်ထဲဝင်သွားပြီး ဖိနပ်တရံဝယ်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာ အရောင်းဝန်ထမ်းကောင်လေးကို မေးလိုက်တယ် ” ဟိတ် ! မမတခုမေးရင် မောင်လေးစိတ်မဆိုးဘူးထင်တယ်” ” မမ အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ သိလား ” ” ၃၂ လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ် မမ ” ” အို ! မဟုတ်ပါဘူးမောင်လေးရယ်” ” ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါနော် မွမွ ” ဆိုင်ထဲကထွက်လာချိန်မှာတော့ သူမဟာ ပီတိနဲ့အတူတိမ်တွေကို စီးမျောနေရသလိုပါ နောက်ထပ် KFC Continue Reading →
တစ်နေ့သောအခါ….သူဌေးလင်မယား နှစ်ယောက်အိမ်ကို အိမ်ဖော် ကောင်မလေး တစ်ယောက် အလုပ်လာလုပ်တယ်…။ ဒီလိုနဲ့ သူ့ကို အိမ်မှုကိစ္စတွေ ခိုင်းတာပေါ့ကွယ်… နောက်တော့ အလုပ်တွေအားလုံးနီးပါး ပြီးသလိုဖြစ်ရော…သူဌေးလင်မယား အိပ်ခန်းကို ဝင်ပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်သတဲ့..။ ဒါနဲ့ သန့်ရှင်းရေး လုပ်နေတုန်း.. အိမ်ဖော်မလေးက သုံးပြီးသား “ကွန်ဒုံး´´ တစ်ခုကိုသွားတွေ့တယ်…. သူလဲ မမြင်ဖူးတော့ ထူးဆန်းပြီး သေချာကျိနေမိသတဲ့… သူမကျိနေတုန်း… သူဌေးမ အနောက်ကနေရောက်လာတယ်.. ။ သူဌေးမလဲ အဖြစ်အပျက်ကိုသိပြီး…ရှက်လဲရှက် ဒေါသလဲထွက်လို့… “စပ်စုလိုက်တာ …နင်တို့ရွာမှာရော.. လင်မယားချင်း ဟွာ မလုပ်ကြဖူးလား ´´ လို့အော်လိုက်တယ်….။ အိမ်ဖော်မလေးလည်း… “လုပ်တော့လုပ်ပါတယ်…. ရှင်တို့လိုတော့ အရေခွံကျွတ်အောင် မလုပ်ဖူး´´ တဲ့…. Lol…. (သွားဖြဲပြီးရယ်နိုင်ပါစေ) Credit – Original Unicode ဆယျရှဈပလပျ Continue Reading →
အပျိုကြီးတွေ လင်ရနိုင်တဲ့ ဆေး
ရှေးအခါက ရွာတစ်ရွာတွင်နေသော ရွာသားတစ်ယောက်ဖြစ်သူစိန်ဖိုးခင် အစားမှားပြီးလေထိုး၍ သေလုမျောပါးဖြစ်နေလေသည်။ ထိုအချိန်တွင် လွယ်အိတ်ကြီးလွယ်၍ ခေါင်းပေါင်းကြီးလည်းပေါင်းထားသော လူကြီးတစ်ယောက် ရောက်လာသည်။ မောမောပန်းပန်းဖြင့် ရေတစ်ခွက်တောင်းသောက်ပြီး ဗိုက်အောင့်၍လူးလိမ့်နေသော စိန်ဖိုးခင်ကိုကြည့်၍ ”မန်ကျည်းသီး တစ်ကျပ်သား၊ ဆားတစ်ကျပ်သား၊ ဆပ်ပြာရည်တစ်ကျပ်သား အရည်ဖျော်ပြီး တိုက်လိုက်၊ အခုချက်ခြင်းကောင်းသွားလိမ့်မယ်” ဟုပြောပြီး ထွက်သွားလေသည်။ ရွာသားများသည် ထိုလူကြီးပြောတာကို မယုံသော်လည်း ဒီအတိုင်းကြည့်နေမယ့်အစား တစ်ခုခုလုပ်ပေးလိုက်မှပဲဆိုပြီး ဖျော်တိုက်လိုက်ရာ ဝမ်းတွေသွားပြီး လေထိုးတာသက်သာသွား၏။ ရောဂါပျောက်၍ ရွာသားများ တအံ့တသြဖြင့် စုတ်တသတ်သတ်ဖြစ်နေကြပြီး ဆေးနည်းပေးသောလူကြီးကို လိုက်ရှာရာမတွေ့တော့ပေ။ ဝေဒနာသက်သာသွာသော စိန်ဖိုးခင်လည်း ”ဒီလူကြီးဟာ နတ်တွေ၊ သိကြားတွေကလွှတ်လိုက်တာများလား၊ ဒီလောက်အလူးအလဲခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာ ကို ချက်ခြင်းပျောက်သွားအောင် စွမ်းတယ်၊ သူ့ကိုရှာမတွေ့လည်း သူ့ဆေးနည်းကိုရပြီ ဆိုတော့ ငါပဲဆက်ပြီး ဆေးဆရာလုပ်တော့မယ်” ဟု ဆိုလေသည်။ အသိဉာဏ်နည်းသော ရွာသားတွေကလည်း ရွာမှာ ဆေးဆရာမရှိသဖြင့် ”ဆရာကြီး” အဖြစ် Continue Reading →
သဉ္ဇာဂျင်းကျော်ကို မြန်မာအိုင်ဒေါအဖွဲ့ ဝေဖန်ပေးခဲ့ကြသည်။ 😁
ရန်အောင်….။ ” အခုလို ဖော်ထားတာ အရမ်းကောင်းတယ်.. ညီမလေးနဲ့လည်း အရမ်းလိုက်ဖက်တယ်.. ကိုယ့်အနေနဲ့ အရမ်းလည်း ရင်ခုန်ရတယ်.. ရှေ့လျှောက် အခုလိုထိုးထွက်အောင်မြင်မှုတွေရရှိပြီး ဒီ့ထက်မကဖော်နိုင်ချွတ်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်အနေနဲ့ မျှော်လင့်မိတယ်..ညီမလေး သင်ဇာအတွက် အကိုဂုဏ်ယူချင်တယ်..ဒါပါပဲ” မျိုးကျော့မြိုင်…။ “ကောင်းပါတယ်..အရင်ကဖင်အတု သင်ဇာဆိုတာထက် ဒီကနေ့ သင်ဇာက လုံးဝဆန်းသစ်ပြီး ကိုယ့်ရင်ကိုရောက်ပါတယ်.. ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုယ့်အိမ်အထိ ခေါ်သွားပြီး ဘရာစီယာတစ်ထည်လောက် ထည့်ပေးချင်ပါသေးတယ်” တင်ဇာမော်…။ ” လုံး……ဝ… လန်းတယ်.. အမအနေနဲ့ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ကို ငေးနေမိတာ ညီမလေး သင်ဇာ ဟုတ်မှဟုတ်ပါ့မလားဆိုပြီး.. နောက်တော့မှ အရင်ဆိုဒ်ထက် နည်းနည်းလေးထွားလာတာကလွဲလို့ လုံးဝ အဆန်းနော်..အမကတော့ဖြင့်လေ ညီမလေးမျက်နှာမှာ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ အင်တာဗျူးဖြေရဲတာကို ကျိတ်ကျိတ်ပြီး သဘောတွေကျနေတာ၊ အမှန်ဆို အောက်ပိုင်းပါ ထပ်ဖော်စေချင်သေးတာ.. အဲ့ဒါမှ ဒီထက်အောင်မြင်မှုတွေရပြီး ဝက်ဝက်ကွဲမှာလေ.. နောက်ဆုံး Continue Reading →
မိတ်ဆွေ ဒီလိုမျိုးရဖို့ ကျနော်7နှစ်လောက် ဖေ့ဘုတ်သုံးရင်း လေ့လာခဲ့ရတာ…..
admin /July 31, 2019
မိတ်ဆွေ ဒီလိုမျိုးရဖို့ ကျနော်7နှစ်လောက် ဖေ့ဘုတ်သုံးရင်း လေ့လာခဲ့ရတာ….. ဟပ်ချလောင်း ဆိုပြီး…. အခုလုပ် ခုရခဲ့တာမဟုတ်ဘူး.. ပညာရပ်တွေ ဆည်းပူးလေ့လာသင်ယူခဲ့ရတယ်…. အချိန်တွေ ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်…. သူများနဲ့ မတူတဲ့ Idea တွေ နဲ့ လမ်းကြောင်းတခုကနေ ဖောက်ထွက်ခဲ့ရတယ် ….. ပညာရှင်တွေ နဲ့ ရင်နှီးအောင်ပေါင်းခဲ့ရတယ်…. Online ပေါ်က ငွေရှာတဲ့ နည်းတွေ မျိုးစုံလေ့လာခဲ့ရတယ်…. ခုတော့…အဲ့ဒီ အကျိုးကျေးဇူးတွေ လက်တွေ့ခံစားနေရပြီလေ……. ခုဆို ဖေ့ဘုတ်ပေါ်က ပိုက်ဆံပုံတွေ ရှာ Save ပြီး ကိုယ့် Wall ပေါ် ပြန်တင် တတ်ခဲ့ပြီလေ 😜😜😜 photo Credit 😁 Unicode မိတျဆှေ ဒီလိုမြိုးရဖို့ ကနြျော7နှဈလောကျ Continue Reading →
ကလေးနှစ်ယောက် စကား ပြောနေကြတာ… “ငါအစ်မက ယောက်ျားလေးလို ဝတ်လိုက်ရင် တကယ့်ယောက်ျားလေး အတိုင်းပဲ” “ဟုတ်လား…” “ဟုတ်တယ်… အဲဒါ ယောက်ျားလေးဟန်ဆောင်ပြီး စစ်ထဲဝင်သွားတာ ခုဆို သုံးနှစ်တောင်ရှိပြီ” “မဖြစ်နိုင်တာကွာ…” “ဘာလို့ မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ” “စစ်သင်တန်းမှာ ရေချိုးတော့ ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ချိုးရတာကွ၊ အဲဒီခါကျ မင်းအစ်မကို မိန်းကလေးမှန်း သိပြီပေ့ါ” “သိတော့ရော… ဘယ်ကောင်က ပြန်တိုင်မှာတုန်း” ” 3ွာန်…” :p :p သန်၎ကို-ရမ်းဘာသာပြန်သည်။ Unicode ကလေးနှဈယောကျ စကား ပွောနကွေတာ… “ငါအဈမက ယောကျြားလေးလို ဝတျလိုကျရငျ တကယျ့ယောကျြားလေး အတိုငျးပဲ” “ဟုတျလား…” “ဟုတျတယျ… အဲဒါ ယောကျြားလေးဟနျဆောငျပွီး စဈထဲဝငျသှားတာ ခုဆို သုံးနှဈတောငျရှိပွီ” “မဖွဈနိုငျတာကှာ…” “ဘာလို့ မဖွဈနိုငျရမှာလဲ” “စဈသငျတနျးမှာ ရခြေိုးတော့ Continue Reading →